Hevitry ny Baiboly: Firaisan’ny Samy Lehilahy na Samy Vehivavy
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Armenianina (Andrefana) Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Corsican Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Féroïen Galoà Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kamba Kantôney Nentim-paharazana Kekchi Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kroaty Kyangonde Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Masedonianina Mooré Myama Norvezianina Nzema Ossète Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Somali Soundanais Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tetun Dili Tiorka Tongan Tseky Tsonga Turkmène Télougou Valencienne Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Nataon’Andriamanitra afaka manao firaisana ny olombelona, saingy ny lehilahy sy vehivavy mpivady ihany no tiany hanao izany. (Genesisy 1:27, 28; Levitikosy 18:22; Ohabolana 5:18, 19) Melohin’ny Baiboly ny firaisan’ny samy lehilahy na samy vehivavy ary ny firaisana ataon’ny lehilahy sy vehivavy tsy mpivady. (1 Korintianina 6:18) Melohiny koa ny manafosafo ny taovam-pananahan’olon-kafa, sy ny manao firaisana amin’ny vava na amin’ny lava-pitombenana.
Melohin’ny Baiboly ny lehilahy miray amin’ny lehilahy na ny vehivavy miray amin’ny vehivavy. Tsy ilay olona anefa no tokony hankahalaina fa ny fanaony. Ampirisihin’ny Baiboly mantsy ny Kristianina mba ‘hanaja ny karazan’olona rehetra.’—1 Petera 2:17.
Efa hoatr’izany mihitsy ve ilay olona hatramin’ny vao teraka?
Tsy miresaka mivantana ny zava-mitranga ao amin’ny vatan’ny lehilahy miray amin’ny lehilahy na vehivavy miray amin’ny vehivavy ny Baiboly. Resahiny kosa hoe mora mandika ny didin’Andriamanitra ny olombelona. (Romanina 7:21-25) Na ahoana na ahoana, dia mandrara ny firaisan’ny samy lehilahy na samy vehivavy ny Baiboly.
Ahoana no hampifaliana an’Andriamanitra, na eo aza ilay faniriana?
Hoy ny Baiboly: “Aza manaiky hofehezin’ny vatanao. Vonoy ny faniriana rehetra hanao firaisana tsy ara-dalàna.” (Kolosianina 3:5; Dikan-teny Anglisy Maoderina) Tsy maintsy mifehy ny sainao ianao, raha tianao ny hamono ny fanirian-dratsy izay mahatonga anao hanao ratsy. Fenoy zavatra mahasoa foana ny sainao, dia ho mora kokoa aminao ny hiala amin’ny fanirian-dratsy. (Filipianina 4:8; Jakoba 1:14, 15) Tsy maintsy miady mafy ianao amin’ny voalohany, kanefa ho mora kokoa aminao izany any aoriana. Mampanantena Andriamanitra fa hanampy anao izy mba ‘hohavaozina hatrany ianao eo amin’ny hery mibaiko ny sainao.’—Efesianina 4:22-24.
Tsy ny lehilahy miray amin’ny lehilahy na vehivavy miray amin’ny vehivavy ihany anefa no mila miady mafy mba hanarahana ny fitsipik’Andriamanitra. Misy olon-kafa an-tapitrisany mila manao toy izany koa. Mbola mpitovo angamba izy nefa hoatran’ny tsy hahita vady, na manambady ihany izy fa tsy afaka manao firaisana ny vadiny. Mifehy tena izy ireo na eo aza ny fakam-panahy. Sambatra ihany anefa izy ireo, ary afaka ny ho toy izany koa ireo lehilahy te hanao firaisana amin-dehilahy na vehivavy te hanao firaisana amim-behivavy, raha tena te hampifaly an’Andriamanitra.—Deoteronomia 30:19.
ijwbq no. 57